Ndị na -emepụta ụgbọala na ndị na -ebubata ụgbọ ala pụrụ iche | China Special Ụgbọala Factory
Ụgbọ ala pụrụ iche A na -eji ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị arọ nke gụnyere gwongworo na -arụ ọrụ elu dị elu, ụgbọ ọkụ na -agbanyụ ọkụ, ụgbọ ihe mkpofu na ihe ndị ọzọ.
A gbanwere ụgbọ ala ọkụ ụfụfụ Dongfeng 5-6 na chassis Dongfeng EQ1168GLJ5. Ụgbọ ala ahụ niile nwere ngalaba ndị njem ọkụ na ọkụ. Ogige ndị njem bụ otu ahịrị ka ọ nwee ahịrị abụọ, nke nwere ike ịnabata mmadụ 3+3.
A na -eji ụgbọ mmiri Dongfeng EQ1041DJ3BDC gbanwere ụgbọ ọkụ ọkụ ụgbọ mmiri anyị. Ụgbọ ala ahụ nwere akụkụ abụọ: ngalaba ndị njem mgbanyụ ọkụ na ahụ. Ogige ndị njem bụ ahịrị abụọ nke mbụ ma nwee ike ịnabata mmadụ 2+3. Ụgbọ ala ahụ nwere nhazi tankị dị n'ime.
Ụgbọ ala ụgbọ elu anyị nwere atụmatụ nke1. Ejiri profaịlụ Q345 dị ala wee mee mkpọtụ na ndị na-apụ apụ, na-enweghị welds gburugburu, mara mma n'ọdịdị, buru ibu n'ike ma dị elu n'ike; 2. Ndị na-eme mkpọtụ nwere ụdị H nwere nkwụsi ike dị mma, enwere ike rụọ ọrụ mpụga n'otu oge ma ọ bụ iche, ọrụ ahụ na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike imeghari n'ọnọdụ ọnọdụ ọrụ dị iche iche; 3. Usoro igbu mmadụ na -anabata ụdị mgbanwe, nke dabara adaba maka mgbanwe; 4. Ntughari ahụ na-agbagharị 360 Celsius n'akụkụ abụọ ahụ wee nakwere usoro mbibi ụdị turbo-worm dị elu (yana ọrụ mmanye onwe na mkpọchi onwe). Enwere ike nweta ndozi ndozi ngwa ngwa site n'ịgbanwe ọnọdụ nke mkpọchi ahụ; 5. Ọrụ ịbanye na -anabata ọnọdụ mkpọchi valvụ njikwa eletrọnịkị, nwere okirikiri mara mma, ọrụ kwụsiri ike na ndozi dị mma; 6. A na -ejikọ ịpụ na ịbanye, ọrụ ahụ enweghị ntụkwasị obi; 7. A na -enweta ụkpụrụ ọsọ ọsọ na -enweghị mgbatị site na valvụ mgbachi n'oge ọrụ ịbanye; 8. Nkata ahụ kwụgburu na -ejide mkpanaka eriri mpụga maka ịhazi ọkwa, nke kwụsiri ike na ntụkwasị obi; 9. A kwadebere nkata a na -atụgharị atụgharị ma ọ bụ nke kwụgidere na mmalite na nkwụsị ọkụ, nke dabara adaba iji rụọ ọrụ na ịchekwa mmanụ ọkụ; gwongworo ọkụ na -agbanyụ ọkụ anyị kewara na gwongworo ọkụ na -agba ọkụ na tank tank ọkụ. Emegharịrị ya site na chassis Dongfeng EQ1168GLJ5. Ụgbọ ala ahụ niile nwere ngalaba ndị njem ọkụ na ọkụ. Ogige ndị njem bụ otu ahịrị ka ọ nwee ahịrị abụọ, nke nwere ike ịnabata mmadụ 3+3. Ụgbọ ala ahụ nwere ihe arụnyere n'ime tankị, akụkụ ihu ya bụ igbe akụrụngwa, na etiti ya bụ tank mmiri. Akụkụ azụ bụ ụlọ mgbapụta. A na-eji tankị na-ebu mmiri na-ebu carbon carbon dị elu ma jikọtara ya na chassis. Ike iburu mmiri bụ 3800kg (PM50)/5200kg (SG50), na mmiri mmiri ụfụfụ bụ 1400kg (PM60). A kwadebere ya na CB10/30 nrụgide dị ala nke Shanghai Rongshen Fire Fighting Equipment Co., Ltd. Mgbapụta ọkụ nwere ọnụego ọnụego 30L/S. Ejiri igwe eletriki ọkụ ụgbọ ala PL24 (PM50) ma ọ bụ PS30W (SG50) nke Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. mepụtara. Enwere ike iji ya ebe niile na brigades nchekwa nchekwa ọha, ụlọ mmepụta ihe na ogbunigwe, obodo, ọdụ ụgbọ mmiri na ebe ndị ọzọ iji lụso nnukwu mmanụ ọkụ ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ. chassis agabigala asambodo ngwaahịa ngwaahịa mba; ntopute nke injin ahụ na-emezu ihe achọrọ maka njedebe nke ise nke GB17691-2005 (ọkọlọtọ mba V); ụgbọ ala ahụ niile agabigala nyocha nke National Quality Equipment Quality Supervision and Inspection Center (mkpesa Mba.: Zb201631225/226) etinyere ya na ọkwa nke ngwaahịa ụgbọ ala ọhụrụ site n'aka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ ozi.